Tale of the Nine Tailed (2020) Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Created byHan Woo-ri
StarringAhn Kil-Kang, Hwang Hee, Jang Won-hyung, Jo Bo-ah, Kim Bum, Kim Hee-jung, Kim Jung-nan, Kim Kang-Min, Kim Yong-Ji, Lee Dong-wook
Synopsis of Tale of the Nine Tailed (2020) Complete
ဒီတဈခါမှာတော့ Tale of nine tailed ဆိုတဲ့ fantasy ဇာတျလမျးတှဲလေးနဲ့ မိတျဆကျပေးပါမယျ။
ဟိုးရှေးရှေးကတညျးက အမွီးကိုးခြောငျးပါမွခှေေးတှဟော သူတို့ရဲ့ သှေးသားဆာလောငျမှုကို ဖွညျ့ဆညျးနိုငျဖို့ အပွဈမဲ့လူတှကေို သှေးဆောငျဖွားယောငျတဲ့ ပုံပွငျတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ အခုခတျေမှာတော့ သရဲတစ်ဆပေုံပွငျတှကေို ယုံကွညျတဲ့သူနညျးပမေယျ့ Nam Ji-A လိုမြိုး ဒီပုံပွငျတှမှော စိတျကူးယဉျထကျ အမှနျတရားတှေ ပိုမြားနိုငျတယျလို့ လကျခံထားတဲ့သူတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဒဏ်ဍာရီနဲ့ ပုံပွငျတှထေဲ ပုနျးကှယျနတေဲ့ မကောငျးဆိုးဝါးတှေ တကယျရှိတယျဆိုတာ သကျသပွေဖို့ ဂြီအာဟာ တီဗီအစီအစဉျတဈခု ဖနျတီးခဲ့ပါတယျ။ ခိုငျမာတဲ့စိတျဓာတျ ထကျသနျတဲ့ဇှဲတှနေဲ့ Ji-A ဟာ ရှားပါး ထူးဆနျးတဲ့ အကွောငျးအရာတဈခုကို ရှာတှခေဲ့တယျ။
အဲဒီအရာနောကျလိုကျရငျး Ji-A ဟာ ခြောမောခံ့ညားပွီး ထကျမွကျတဲ့ Lee Yeon နဲ့ ဆုံတှခေဲ့တယျ။ ကိုယျ့မကျြလုံးနဲ့မွငျရတာထကျ မမွငျနိုငျတဲ့အရာတှကေ အမြားကွီးရှိမှနျးသိလာခဲ့တဲ့ Ji-A… သူ့ကို အနီးကပျ စောငျ့ကွညျ့နရေငျး သာမနျလူတဈယောကျလို့ ယုံကွညျလာတဲ့အခါမှာတော့…မွို့ထဲကို မကွာသေးခငျကမှ ပွောငျးလာတဲ့ အမွီးကိုးခြောငျးမွခှေေး Lee Yeon. ဂြီအာက သူ့နောကျကွောငျးကို စုံစမျးနတေယျဆိုတာသိလို့ သိုသိုသိပျသိပျပဲ နခေဲ့ပမေယျ့ သှေးဆာနတေဲ့ သူ့ရဲ့ညီ Lee Rang ပျေါလာတဲ့အခါမှာတော့ ရှုပျထှေးကုနျပါတယျ။ Lee Yeon ရော ဂြီအာကို အငွိုးကွီးတဲ့ ညီလကျကနေ
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Tale of nine tailed ဆိုတဲ့ fantasy ဇာတ်လမ်းတွဲလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
ဟိုးရှေးရှေးကတည်းက အမြီးကိုးချောင်းပါမြေခွေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သွေးသားဆာလောင်မှုကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ အပြစ်မဲ့လူတွေကို သွေးဆောင်ဖြားယောင်တဲ့ ပုံပြင်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ သရဲတစ္ဆေပုံပြင်တွေကို ယုံကြည်တဲ့သူနည်းပေမယ့် Nam Ji-A လိုမျိုး ဒီပုံပြင်တွေမှာ စိတ်ကူးယဉ်ထက် အမှန်တရားတွေ ပိုများနိုင်တယ်လို့ လက်ခံထားတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒဏ္ဍာရီနဲ့ ပုံပြင်တွေထဲ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြဖို့ ဂျီအာဟာ တီဗီအစီအစဉ်တစ်ခု ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ် ထက်သန်တဲ့ဇွဲတွေနဲ့ Ji-A ဟာ ရှားပါး ထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရှာတွေ့ခဲ့တယ်။
အဲဒီအရာနောက်လိုက်ရင်း Ji-A ဟာ ချောမောခံ့ညားပြီး ထက်မြက်တဲ့ Lee Yeon နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတာထက် မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေက အများကြီးရှိမှန်းသိလာခဲ့တဲ့ Ji-A… သူ့ကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေရင်း သာမန်လူတစ်ယောက်လို့ ယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာတော့…မြို့ထဲကို မကြာသေးခင်ကမှ ပြောင်းလာတဲ့ အမြီးကိုးချောင်းမြေခွေး Lee Yeon. ဂျီအာက သူ့နောက်ကြောင်းကို စုံစမ်းနေတယ်ဆိုတာသိလို့ သိုသိုသိပ်သိပ်ပဲ နေခဲ့ပေမယ့် သွေးဆာနေတဲ့ သူ့ရဲ့ညီ Lee Rang ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ ရှုပ်ထွေးကုန်ပါတယ်။ Lee Yeon ရော ဂျီအာကို အငြိုးကြီးတဲ့ ညီလက်ကနေ
Firt air date2020-10-07
Last air date2020-12-03
Home PageTale of the Nine Tailed (2020) Complete
The Penthouse: War in Life (2020) Season 1 Complete
The Good Detective (2020) Complete